Ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo cadeeyey sanadkii ugu xumaa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo cadeeyey sanadkii ugu xumaa
Ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo cadeeyey sanadkii ugu xumaa
Ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa cadeeyey in sanadkii 2019 uu ahaa sanadkii ugu xumaa ee soo maray saxaafadda Soomaaliya. Waxay sheegeen in la bar-tilmaameedsaday 82 suxufi oo 53 ka mid ah xabsiga la dhigay, labana la dilay, halka 12 suxufi ay dalka ka carareen, 15 jeerna la is hortaagay waajib gudasho suxufiyiin, 7 xarun warbaahineed si sharci darro ah loo xiray.
Saxaafaddu waa mid ka mid ah awoodaha afarta ah ee dowladda. Awoodaha seddaxda ah ee laanta sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka in ay dhexdooda is dheellitiraan ayuu dastuurk dhigayaa, laakiin saxaafaddu seddaxdooda ayey bulshada u dheellitirtaa. Waxay masuuliyadeedu tahay in ay bulshada u soo tebiso xog sugan, dheellitiran, masuuliyadna ku dheehantahay, si ay dadwaynuhu ula socdaan waajib gudashada hay’adaha kale ee seddaxda ah. Sidaas darteed saxaafadu waa codka iyo awooda shacabka.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo waxey dhufaantay laantii sharci dejinta iyo garsoorka. Waxay xadgudub, cabburin iyo caga juglays joogta ah ku haysaa saxaafadda. Ujeedka ugu wayn ee arrinkaas ka danbeeyana waa in aan lala xisaabtamin, dadwaynuhuna xog dhab ah helin.
Waxay diideen isaga iyo xukuumaddiisaba in ay warbaahinta madaxa bannnaan la hadlaan, kulamo dadwayne iyo doodo furan qabtaan. Waa kalsooni daro, hoggaan xumo iyo xadgudub.
Maanta oo ku beegan maalinta saxaafada aduunka ayaan hambalyo u dirayaa dhamaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee duruuftaa qalafsan dadkooda ugu shaqeynaya. Waxaan leeyahay guulaysta, waxaad tihiin daljir dahsoon oo danta dalka iyo dalka u adeegaya
Previous articleXaaladii ugu danbeeyey Covid19 soomaaliya
Next articleGuddoomiyaha gobolka Sool oo sheegey in amaradii gudiga ka dhaqan galeen gobalka sool